သက်တော်ရာကျော် ရှည်စေသော်ဝ်-သင့်လူ (စာညွှန်း) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Literature/Books » သက်တော်ရာကျော် ရှည်စေသော်ဝ်-သင့်လူ (စာညွှန်း)	15
သက်တော်ရာကျော် ရှည်စေသော်ဝ်-သင့်လူ (စာညွှန်း)
ဒီကနေ့ရဲ့ မွေးနေ့ရှင်အပေါင်းအတွက် မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ် ဆရာ သင့်လူ ဘာသာပြန်တဲ့ `သက်တော်ရာကျော်ရှည်စေသော်ဝ်´စာအုပ်ကလေး လက်ဆောင်အဖြစ် စာမြည်းပေးပါတယ်။
ဒီစာအုပ်ကို ငါတို့စာပေက မူရင်းစာရေးဆရာထံမှ မြန်မာဘာသာပြန်ခွင့် မူပိုင်ယူပြီး ပြန်ထားတယ်ဆိုတာကလည်း ထူးခြားချက်တခုပါပဲ။
2005 မေလ 2ရက်နေ့မှာ အသက် ၁၀၀ ပြည့်တဲ့ အဖိုးကြီး အယ်လန် ဟာ မွေးနေ့ပွဲကျင်းပပေးမယ့် မြို့တော်ဝန်နဲ့ ပရိသတ်ကို ရှောင်ကွင်းပြီး သူနေတဲ့ လူအိုရုံရဲ့ ပြူတင်းပေါက်ကို ကျော်ပြီး ထွက်ပြေးရာက ဖြစ်လာတဲ့ ဇာတ်လမ်းပါ။
သူထွက်ပြေးရာလမ်းမှာ ပတ်သက်မိတာက အကြမ်းဖက်သမားများ The Violence ဆိုတဲ့ ခပ်မိုက်မိုက်နာမည် ပေးချင်တာကို စာလုံးပေါင်းမှားပြီး တယောသမားများ The Violins လို့ နာမည်ရသွားတဲ့ ဂိုဏ်းဝင် ၄ဦးကြီးများတောင်ရှိတဲ့ ပြန်လမ်းမရှိ လူဆိုးဂိုဏ်းကြီးရဲ့ ပေါင်သန်းငါးဆယ်ပါ အိတ်ကြီးကို မ သွားမိရာက အကုန်ရောရှုပ်ကုန်တဲ့ ဇာတ်ကို ဟာသရေးထားတာ။
ဘာသာပြန်တဲ့ ဆရာ သင့်လူကလည်း မြန်မာပြန်ရာမှာ လေးမနေဘဲ ခေတ်နဲ့ညီတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေ သုံးထားတော့ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ဇာတ်လမ်းလို့တောင် မထင်ရဘဲ တခန်းပြီး တခန်း လက်ကမချနိုင်အောင် ဖတ်ဖြစ်သွားမှာပါ။
ဒီရာပြည့်အဖိုးကြီးက အတန်းပညာ ၃တန်းပဲ ရှိပြီး ခပ်ကြောင်ကြောင်ပေမယ့် သူ့ဇာတိ ဆွီဒင်မှာ ဖောက်ခွဲရေး ၀ါသနာကို လေ့လာရာက
စပိန်ဗိုလ်ချုပ် ဖရန်ကို၊အမေရိကန်သမ္မတ ထရူးမင်း၊
ထိုင်ဝမ်သမ္မတချန်ကေရှိတ်ကတော် စုမေလင်း၊ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ချာချီ၊ရုရှားက ခေါင်းဆေင်ကြီးစတာလင်၊
တရုတ်ခေါင်းဆောင်ကြီးမော်စီတုန်း၊မြောက်ကိုရီးယားသမ္မတ ကင်အီဆွန်းနဲ့ ကင်ဂျုံအီ၊
အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတ ဆူဟာတို၊ပြင်သစ်သမ္မတ ဒီဂေါလ် တို့နဲ့ပါ ရောရှုပ်လာတဲ့ သူ့ဘ၀ ကို ဟာသ ရေးထားတာမို့ ဖတ်ပြီးပြုံး ပြုံးပြီးဖတ်ရင်း သက်တော်ရာကျော် ရှည်ကြပါစေ။
ရာကျော်ဖိုးဖိုးအယ်လန်ရဲ့ ဆောင်ပုဒ်ကတော့ ` အားလုံးဟာ သူ့သဘော သူဆောင်တာပဲ။ဖြစ်စရာရှိတာ ဖြစ်ကို ဖြစ်မှာပဲ´ တဲ့။
padonmar says: ဒီစာအုပ်ဝယ်တုန်းက ၀င်ဒီလောရုံရဲ့ စာအုပ်နောက်ဖုံးက ကြော်ငြာကြည့်ပြီး စိတ်ဝင်စားလို့ ၀ယ်လိုက်တာ။ မဖတ်ဖြစ်သေးဘူး။အကို တယောက်မွေးနေ့ကို ဒီစာအုပ်လေး လက်ဆောင်ပေးမယ် စိတ်ကူးပြီး မပေးခင် ဖတ်ကြည့်တော့ လက်ကမချနိုင်ဖြစ်လို့ ညွှန်းလိုက်တာပါ။
( မျှစ်ကြော်ပြုံး စာအုပ်တော့ ဖတ်ညွှန်းမရေးတာ စိတ်မဆိုးပါနဲ့လို့ ကြို တောင်းပန်ပါတယ်၊ကိုယ့်ထက် ပိုတတ်သူများ ရေးမှာလို့ သိနေတာကြောင့်)
စာမေးပွဲ ရာသီ ရောက်လို့ ဂဇက်ဆွေမျိုးတွေကို ဒီစာလေးနဲ့ ခဏ နှုတ်ဆက်ပါတယ်။
မြစပဲရိုး says: ငယ်တုန်းက “ကိုယ့်ကံကြမ္မာကကိုယ့်လက်ထဲ ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးနိုင်တယ်” ဆိုတဲ့ဝါဒစွဲ နဲ့ ဇွတ်ပေါ့။
အသက်ကြီးလာလေ လောကကြီး က ကိုယ်ထင်တာထက် မာယာများလေ ဆိုတာ သိလာချိန် သိပ်ပြီး လေမကျယ်ရဲ တော့ဘူး။
အဲဒီ ဖိုးဖိုးအယ်လန် ပြောသလို “အားလုံးဟာ သူ့သဘော သူဆောင်တာပဲ။ဖြစ်စရာရှိတာ ဖြစ်ကို ဖြစ်မှာပဲ” ဆိုတာ ကိုဘဲ တိုးတိုးလေး ရွတ်နေတော့မယ်။
အဲဒီ စကားလေးအတွက်ကျေးဇူးပါ အစ်မရေ။
မွေးနေ့ရှင်ကို ရမ်းတုတ်ကြည့်မယ်။ မဟုတ်လဲ လွဲ ပေါ့။
All the best for your exam My Dear Sis! :-))
kai says: ပုံတွေမမြင်ရသမို့.. ဖင်တုန်ပလပ်ကင် Photon plugin ကိုပိတ်လိုက်မှမြင်ရတော့တယ်…။
“ဖြစ်ချင်တာတွေမဖြစ်ရင်လည်း.. မဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်စမ်းကွာ.. အေ့..” တဲ့..။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ပယင်းရောင် ??
ဦးကျောက်ခဲ says: ဟုတ်ဘူး…
ကျော်ဟိန်းရယ် ကောလိပ်ဂျင်နေဝင်းရယ် သရုပ်ဆောင်တဲ့
“တစ်ဦးက စေတနာ ၊ တစ်ဦးက မေတ္တာ” ဓာတ်ရှင်…
“ဟား… ဟား… ငါလည်း အရင်တုန်းက ….
ဆ ဆရာကြီး ခေါင်းလောင်းတီးပေါ့ကွာ” … အလွန်ကောင်း…
kai says: ကျေးကျေး..။ မှတ်ဥာဏ်ကောင်းချက်..။
ဇီဇီကတော့.. သောက်ဖို့ပဲ.. တွေးနေသလားမသိ.. ၊မှားပြောတာတောင်.. ပယင်းရောင်…တဲ့..။
အေ့ ထည့်လိုက်လို့နဲ့တူတယ်..။ ဆိုတော့…ဒီခေတ်မယ်..သက်တော်ရာကျော်ရှည်ဖို့ဆုတောင်းရန်မလို…
သက္ကရာဇ် …အဲ.. အဲ..
ခရစ်နှစ်.. ၂၀၀၀ နောက်မွေးသူ.. လူသားများရဲ့.. တ၀က်ကျော်. အသက်၁၀၀ကျော်ကြမယ်တဲ့…။
၀ီလီလေးလဲပါတယ်.. Over Half Of Today’s Babies Are Expected To Live Past 100 …
Oct 1, 2009 – Living to 100 may be seen asalong life now, but according toanew review it may … nations since the year 2000 can expect to live into the triple digits. … with half of all babies born in 2007 in the U.S. likely to live to age 104.
ဇီဇီခင်ဇော် says: Happy birthday, ရွှေကြည် နဲ့ ရွှေအိ
အောင် မိုးသူ says: ဝယ်ဖတ်ဖို့ မှတ်ထားလိုက်ပါ့မယ်။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ကောလိပ်ဂျင်နေ၀င်း နဲ့ ကျော်ဟိန်း ပါတဲ့
တစ်ဦးက မေတ္တာ တစ်ဦးက စေတနာ ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားထဲက
တကယ်ဖြစ်ချင်တကယ်လုပ် အဟုတ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ပေါ့
သဗ္ဗေသတ္တာ ကမ္မသကာဆိုတဲ့ စိတ်က ပိုကြီးစိုးသွားသလိုပါဘဲ
Shwe Ei says: -အဓိပ္ပါယ်ရှိသော မွေးနေ့လက်ဆောင်အတွက် ကျေးဇူးပါ အန်တီဒုံ ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ပါမယ်… –
Mike says: ♫♪♫.ဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ရင်…ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်စမ်းဆိုတဲ့..ဆင်ကန်းတောတိုး သဘောမျိုးရိုးနေပီ♫♪♫
kai says: “ဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ရင်…ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်စမ်း” ကအမှန်စာသားပေါ့နော..။
“Things are what they are, and whatever will be, will be.” ― Jonas Jonasson
` အားလုံးဟာ သူ့သဘော သူဆောင်တာပဲ။ဖြစ်စရာရှိတာ ဖြစ်ကို ဖြစ်မှာပဲ´
Ma Ma says: ပထမဆုံးစာအုပ်နဲ့တင် ကမ္ဘာကျော်တယ်ဆိုတော့ နည်းတဲ့ပါရမီမဟုတ်ဘူး။
စာအုပ်တွေ ဖတ်မယ်ဖတ်မယ်ဆိုပြီး မဖတ်ဖြစ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘာစရိုက်ရှိတဲ့သူလဲလို့ တွေးနေတာ ၀ိတက်စရိုက်ရှိတာ အဖြေပေါ်သွားပြီ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
black chaw says: ဘာသာပြန် စာအုပ်မို့
Alinsett @ Maung Thura says: ဖတ်သင့်တဲ့ စာအုပ်ကောင်းလေး ညွှန်းပေးလို့ ကျေးဇူးပါ တီဒုံ…
ဝယ်ဖို့ အကြောင်း ညီညွတ်တဲ့အခါ ဝယ်ဖတ်ဖို့ ဝယ်သိမ်းဖို့ လုပ်ပါ့မယ်။
ဝယ်ဖို့ အကြောင်း မညီညွတ်ခဲ့ရင်….. တီဒုံ့ ဆီက ငှားဖတ်ပါ့မယ်။